Haween siyaabo kala duwan dil iyo dhaawac loogu geystay magaalada Muqdisho
Mjournal :–Xalay ilaa saakay ayaa siyaabo kala duwan magaalada Muqdisho dilal iyo dhaawac loogu geystay haween la sheegay in kooxihii dillka u geystay baxsadeen. Wararku waxaa ay sheegayaan in rag hubeysan xalay ku da xalay ku dilay degmada Hodan Haweeney lagu magacaabayay...
Mjournal :–Madaxweynaha dowlad gobolleedka Puntland C/wali Max’ed Cali Gaas oo galinkii hore shalay ka amba baxay magaalada Garoowe ee Caasimadda Puntland waxa uuna gaaray caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa waxaana uu kulan gaar ah la qaatay Wasiirka Arrimaha...
Kenya iyo Jarmalka oo ka wadda hadlay xiriirka ganacsi ee labada dowladood
Mjournal :–Madaxda dalalka Kenya iyo Jarmalka ayaa yeeshay wada hadal ku saabsan sidii ay isaga kaashan lahaayeen sare u qaadista ganacsiga iyo sugidda ammaanka. Madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha Germany Angela Markel ayaa dhawaan yeeshay kulan 2 geesood ah oo ka...
Tiro xildhibanno ah oo mooshin ka dhan ah shirka Jowhar u gudbiyay guddoonka baarlamaanka
Mjournal :–Tiro xildhibaanno ah oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa mooshin ka keenay shirka maamul u sameynta labada Gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee gogoshiisa ay taalo magaalada Jowhar. Mooshinkan ayaa waxaa keenay 42 Xildhibaan, iyagoo soo jeediyay in dib...
Ciidammada AMISOM oo dad shacab ah ku dilay deegaanka Buula-mareer, Sh/hoose
Mjournal :–Wararka naga soo gaaraya dulleedka deegaanka Buula-mareer oo ka tirsan gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in xoogaga AMISOM dad shacab ah saaka ay ku laayeen deegaankaasi. Dadkan la dilay ayaa la socday gaari u soo socday magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay...
Maxkamad ku taalla Mombasa oo dil toogasha ku xukuntay nin ku eedeysnaa dilka wadaad caan ahaa
Mjournal :–Maxkamad ku taal Magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa shalay xukun dil ah waxa ay ku riday nin lagu magacaabo Maxamed Suudi Maxamed, kaasi oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay dil loo geystay Sheekh Max’ed Idiris. Qaadiga maxkamada ayaa sheegay in Maxamed...
RW Sharm’arke oo la kulmay wasiirka arrimaha dibada Morocco
Mjournal :–Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ayaa kala hadlay dowladda Morocco, sidii ay Soomaaliya kaga taageeri lahayd xoojinta ammniga iyo la dagaallanka argagixisida. RW Sharm’arke ayaa dalka Turkiga kulan kula qaatay Wasiirka arrimaha dibada ee Dalka...
Kulan madaxeedkii ammniga Africa oo ka furmay Baxar Daar
Mjournal : –Shir madaxeedka Amniga Afrika ee Tana Forum ayaa maanta ka furmaya magaalada Baxar Dar ee dalka Itoobiya, iyadoo shirkan ay ka qeyb galayaan Madaxweynayaal ka socota dalalka Afrika. Shirka Tana Forum ayaa ah Shirkii 5-aad ee Madasha Sare ee Amniga Qaaradda...
Madxweyne Siilaanyo” DF waa in ay qaddarisaa madax-banaanida Soomaaliya
Mjournal :–Madaxweynaha dowladda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa soo saaray maanta warbixin uu ku sheegay inaysan Somaliland ka mid ahayn Maaamullada Somalia, balse ay tahay dal ka madax-bannaan Soomaaliya. Siilaanyo ayaa kaga jawaabayay hadalkan go’aankii kasoo...
Wasiirka maaliyada oo Washington uga qeyb-galay shirka hay’adda IMF
Mjournal :– Shir sanadle ah oo ay soo qaban qaabiyeen Bangiga adduunka iyo hay’adda lacagta dunida ee IMF ayaa ka furmay magalada Washinton ee dalka Mareykanka kaasi oo ay ka qeyb galeen wafuud kala duwan oo ka kala socota dowladaha caalamka. Dowladda Soomaaliya ayaa...
Madaxda wadamada islaamka oo ku shirsan dalka Turkiga
Mjournal :–Shir madaxeedka wadammada Islaamka ayaa lagu qanayaa dalka Turkiga kaa soo ay ka qeyb-galayaan ilaa 30 hoggaamiye, waxaana looga hadlaya sidoo loo xallin lahaa khilaafyada u dhaxeeya dadka muslimiinta ah. Boqorka Sacuudiga Salman iyo madaxweynaha Iran Hassan...
C/wali Gaas oo Addis Ababa u dhoofay halkaa uu uga qeyb-galayo shir amniga looga hadlayo
Mjournal :–Wafdi uu Hoggaaminayo Madaxweynaha Puntland, C/weli Maxamed Cali [Gaas] ayaa Maanta u dhoofay Dalka Ethiopia, halkaas oo ay uga qayb-galayo shirar Canacasiga iyo Amniga Afrika la xiriira. C/weli Gaas iyo wafdigiisa ayaa waxaa sii sagootiyiay ku-xigeenkiisa...
Madaxweyne Xassan Sheekh oo ka degay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya
Mjournal :-Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud ayaa ka degay magaalada Addis Ababa, isagoo uga sii gudbi doona magaalada Baxardaar ee dalka Ethiopia oo beri uu ka furmi doono Shirkii 5-aad ee Madasha Sare ee Amniga Qaaradda Afrika (Tana High-Level Forum...
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka DF oo lagu weeraray Beled-Xaawo, Gedo
Mjournal :–Mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo C/fataax Nuur Mataan ayaa lagu waramayaa in habeenimadii xalay lagu weeraray degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo. Weerarkan oo la sheegay inuu ahaa mid loo adeegsaday bambooyin ayaa la sheegayaa inay ku...
RW ku-xigeenka Soomaaliya oo la kulmay danjirayaasha Faransiiska, Mareykanka iyo Ingariiska
Mjournal :–Ra’iisal wasaare ku-xigeenka xukuumada federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa maanta kulan la qaatay Wadamada ,Faransiiska ,Maraykanka iyo Ingriiska Danjireyaasha uu Mudane Cumar Carte la kulmay ayaa kala ah Rep Peter Wilson, Rep Alexis Lamek, iyo...
Somali leaders have consented to the holding of a General Election later this year. The leaders made the resolution during a three-day conference that ended in Mogadishu on Tuesday. The regional states and the central government officials reiterated their commitment to a no...
Axmed Madoobe oo guul taariikhi ah ku tilmaamay shirkii madasha wadda-tashiga
Mjournal :–Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay shirkii Madasha wadatashiga qaran ee looga hadlay doorashooyinka iyo go’aanadii ka soo baxay. Axmed Madoobe ayaa sheegay in shirkaas looga...
C/wali Gaas oo sheegay in ay aqbaleen qodobadii ka soo baxay shirkii madasha-wadda-tashiga
Mjournal :– Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas iyo wafdigii uu horkacayay ee ka qeyb-galay shirkii madasha-wadda-tashiga ayaa dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad gobolleedka Puntland. C/weli Gaas, ayaa intaas kaddib ka Warbixiyey safarkii isaga...
Madaxweyne Xassan Sheekh oo hishiis la saxiixday dhigiisa dalka Sudan
Mjournal :–Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud iyo dhigiisa Sudan Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa kulan gaar ah ku yeeshay xarunta Madaxtooyada magaalada Khartoum ee dalka Sudan. Labada hoggaamiye ayaa ka wadahadley xoojinta xiriirka labada dal , iyagoo...
Xildhibaano iyo siyaasyiin qaadacay qodobadii shirka madasha-wadda-tashiga
Mjournal :–Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ka soo horjeestay go’aanadii ka soo baxay shirkii Madasha wadatashiga qaran. Kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay doorashada dalka ka dhaceyso iyo qaabka...